Mid ka mid ah Haweenkii u ololeynayay in ay gudaha dalka Sacuudiga ku kaxeystaan baabuurtooda oo iyada Nafteeda Baauur Dilay - iftineducation.com
Manhal Al-Shariif oo 32 jir ah ayaa ka mid aheyd ama madax ka aheyd koox dumar ah oo u olaleynayay in dumarka dalka Sacuudiga ku dhaqan in loo fasaxo in ay baabuurtooda ay wadan garaan kadib markii dowladda sacuudiga ay si adag u diiday in dumarka loo ogolaado in ay ka xeeyaan baabuurta.
Manhal Al-shariif ayaa kal hor loo xiray kadib markii ay filim ama fiidiyoow iska duubtay iyadoo oo baabuur ku wadata magaalada jidda ee dalka sacuudiga kadibna soo gilisay fiidowgii ay iska duubtay ayna ku faafisay shabakadda interenet-ka ee lagu baahiyo muuqaalada ee loo yaqaan youtub-ka.
haweeneydan manhal ayaa ku geeriyootay shil baabuur kadib markii ay meel kubri ah ama buundo ay isku dhaceyn baabuurkii ay saarneyd iyo baabuur xamuul ah oo ka yimid dalka kuwait waxaana markiiba halkaa soo gaaray ciidanka booliska iyo baabuurta ambalaasyada waxaana halkii laga qaaday manhal oo meyd iyo dhowr haween oo dhaawac ah.
hayeeshee dhimashada manhal al-shariif ayaa dhacday kadib markii maalmo yar uun ka hor ku soo biireen haween kale oo diidan xayiraada dumarka dalka sacuudiga lagaga soo rogay in ay baabuurta ay ku ka xeeyaan guud ahaan dalkaasi sacuudiga.
hasa-ahaatee manhal al-shariif iyo koox kale oo haween ah ayaa intii aanay shilka baabuur ku geyriyoon bogga facebook-ga ka billaabeen meel iyaga u gaar ah oo ay ku faafiyaan ama ay ku baahiyaan hal ku dhikyo ah” i bar sida loo ka xeeyo baabuurta waxaan difaacayaa nafteyda ee”.
ugu dambeyntii haweenka khaliijka carabta ayaa inta badan waxaa lagu dhex arkaa wadooyinka iyagoo baabuurtooda wata wadamada loo ogol yahay in dumarka ay ka xeeyaan baabuurta ayaa waxaa ka mid ah dalalka qatar, kuwait, imaaraadka carabta, bahrain balse haweenka dalka sacuudiga ayaanan loo ogoleyn marnaba in ay baabuurta ka xeeyaan